Culimada Ictisaam oo ku baaqay in la tirtiro Kooxda Al-shabaab (Dhegayso) – Radio Daljir
Culimada Ictisaam oo ku baaqay in la tirtiro Kooxda Al-shabaab (Dhegayso)
Febraayo 19, 2013 6:01 b 0
Garoowe, Feb, 19, Culimada Soomaaliyeed gaar ahaana Jameecada Al-Ictisaam oo ay ku midaysan yihiin culimada ugu waaweyn Soomaaliya oo maalmihii u danbeeyey shir uga socdey magaalada Garoowe ee caasimada Puntland ayaa maanta soo saaray bayaan soosaaray ayaa mar kale ku celiyey in Kooxda Al-shabaab ay dileen Sh Cabdulqaadir Nuur Faarax.
Culimada ayaa ugu horayn umahadceliyey Dawlada Puntland, Somaliland iyo Dawlada Federalka oo gacan ka geystey qabashada danbiilayaashii, iyo daaweynta dadkii ku dhaawacmay qabashadii gacan ku dhiiglaha.
Waxay sheegeen in kooxda Al-shabaab tahay shufto burcad ah kuwaasoo ka been sheegaya diinta islaamka iyo caqiidada saxda ah.
Ugu danbayn culimadu waxay ku baaqeen in culimada iyo guud ahaan umada Soomaaliyeed isugu yimaadaan shir heer qaran ah oo lagaga arinsado Kooxda Al-shabaab oo ay ku tilmaameen masiibo aan umada u reebayn diin, caqli iyo aqoon midna.
Warsaxaafadeedka ay soo saareen culimadu waxaa warbaahinta u akhriyey Sh Axmed Cabdisamed oo kamid ah culimada Soomaaliyeed ee shirka ku yeeshay magaalada Garoowe .
Xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya oo tababar uga socdo Nairobi.(Dhegayso)
Caawa iyo Daljir ,Isniin, Feb 18-2013, Cabdirisaaq Cali Cabdi ‘Silver’ ( Daljir Galkacyo )